I Yarn Guide Eyelet China Manufacturers & Suppliers & Factory
I Yarn Guide Eyelet - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 8 ye-I Yarn Guide Eyelet)
I-grooved alumina eyelet ceramic guide
Siye sahlinzeka ngezinhlobo eziningi ezihlukahlukene zekhoyili ye-ceramic eyelet ngezinto ozikhethela, njengoluhlobo olujwayelekile, uhlobo lwe-flanged, uhlobo oluthile, uhlobo olufakiwe kanye nesakhiwo esithile esikhethekile. Umbhalo we-guide ye-ceramic eyelet: ● I-Aluminium oxide ● I-Zirconium oxide ● I- Titanium...
I-pink alumina ceramic ring guide
Senza izinhlobo eziningi, eziningi zezindandatho ze-ceramic njengezinkampani zamakhasimende ngamunye noma amasampula asebenzayo, ezihlanganisa izinto ezihlukene ezigubungqangi zebanga, umbala ohlukile, isimo esihlukile , izinga lokunemba elihlukile nokunye okunye. Uma uzofunda imininingwane eyengeziwe, sicela ubheke...
I-friction ephansi ye-flanged eyelet
Ukuhlanzeka okuphezulu kwe-alumina wire guide tube
Silokhu sibhekene nokuhlukunyezwa kwezingubo ze-textile ze-ceramic iminyaka eminingi, ikakhulukazi izinto ezisetshenzisiwe esisetshenziselwa zihlanganisa ubukhulu be-alumina, i-zirconium oxide ne-titanium oxide. Siphelile ukwakha ububanzi obuhlukahlukene obuhlukahlukene be-tube yochungechunge yoceramic wire kusuka...
95% i-alumina ceramic pigtail guide
Siyakwazi ukukhiqiza umhlahlandlela wohlobo lwe-ceramic ehlukahlukene kungenziwa kukhiqizwa kanye nokudweba kwamakhasimende. Umhlahlandlela we-Ceramic umdwebo uvame ukwenza ngo-95%, 99% i-alumina ngenxa yokumelana nokugqoka okungaphezulu kokuphezulu, ukuhlukunyezwa okuphansi kunamaplastiki nezensimbi. Siye senza...
I-Ceramic eyelet guide ngokuvamile iyenziwe ngamaphesenti angu-95, 99% alumina noma i-titanium oxide ceramics. Siyakwazi ukuhlinzeka ngezinhlobonhlobo eziningi ze-eyelet guide kumbala ohlukile, njengehlobo olulodwa lwe-flanged, izinhlobo ezimbili ze-flanged, uhlobo oluvuthayo, uhlobo olufakiwe. Ukuze unciphise...
I Yarn Guide Eyelet
I-Yarn Guide Eyelet
I-Pigtail Yarn Guide
I-Eyelet Wire Guide